Zavatra tokony hianarin'ny mpamorona sary ao amin'ny oniversite | Famoronana an-tserasera
Rehefa tonga eny amin'ny oniversite dia zava-dehibe ny mianatra mahatakatra ireo olana izay ivelan'ny faritra mampionona ny mpamorona tsirairay ary indrisy, ny oniversite tsy mampianatra mihitsy ny fomba fifampiraharahana amin'ny mpanjifa, mpitantana, mpamorona ary toerana hafa manodidina ny tontolon'ny mpamorona, izay mifampiresaka amin'izy ireo.
Toy izany koa, mahatakatra ny olona sy ny antony manosika fa ny tsirairay amin'izy ireo dia manana ary koa, tsy handray zavatra matotra sy hentitra loatra, fa kosa mba hikiry kely kokoa ary hiezaka ny hahita ny zava-drehetra amin'ny fomba fijerin'ny hafa, fahaiza-manao lehibe fa ny mpamorona dia tokony hianatra any amin'ny oniversite, saingy misy zavatra maro hafa.
1 Mianara mianatra
2 Mianara mamerina
3 Manàna mpitaiza
Mety ho hafahafa ihany izany na tsia, tsara raha mahay mianatra mianatra any amin'ny oniversite ny mpamoronamba hahafahan'izy ireo ho vonona hiaina fianarana mandrakizay bebe kokoa nefa tsy hipetraka amin'ny haavon'ny fahalalany ankehitriny, satria misy zava-baovao mila ianarana hatrany.
Tsy misy tetikasa vonona tanteraka; azo atao ny mamerina ny zava-drehetra ary mandavorary azy.
Na izany aza, miankina amin'ny mpamorona tsirairay ny misaintsaina ny fifandraisana Tombontsoa-vidiny izany dia ho azo avy amin'ny ezaka tsy tapaka manodidina ny fanidiana ny hetsika mitohy amin'ny tetikasa manaraka sy izany zavatra tsy azon'izy ireo ampianarina any amin'ny oniversite izany ary mety ho tsara ny mianatra, satria mazava ho azy fa tena ilaina tokoa ny mianatra fa ny tetik'asa dia azo hatsaraina amin'ny lafiny iray, hahatratra ny fandanjalanjana zavatra.
Ilaina ny fiafaran'ny tetikasa ary ny fahalavorariany no hiantoka raha hahomby ilay mpamorona na raha tsy hahomby izy.
Mahazo torohevitra ary mianara amin'ny olona efa za-draharaha raha eny amin'ny oniversite ianao dia mety hampivoatra haingana kokoa ny mpamorona endrika iray. Ny mpitaiza dia tsy mila manana fiofanana mitovy amin'ny mpamolavola, ny zavatra tian'ny olona ianarana fotsiny no fantany.
Manàna mpitaiza mazàna dia safidy tsara indrindra io any amin'ny oniversite, satria ahafahanao mahazo ny fahalalanao, izay hanampy anao tsy hihazakazaka amin'ireo sakana sy fanamby tsy maintsy natrehin'ilay mpitaiza, mba hitsimbinana angovo, fotoana ary vola.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Zavatra tokony hianarin'ny mpamorona sary ao amin'ny oniversite